Naaulo Dhun - Page 77 of 82 - Naulo Samachar,Entertainment & More
केहि समय अगाडीबाट निकै नै भाईरल बनेका सचिन परियारका बुवा तेजेन्द्र परियार बिबादमा तानिएका छन् । सचिन परियार कि आमा घरमा हुदा हुदै पनि तेजेन्द्र परियारले अर्को श्रीमती ल्याएका रहेछन । सचिन परियार भाईरल हुदै गर्दा सचिन परियार कि आमा छोराको न्यास्रो लाग्यो,भेट्न पाउनु पर्छ भनेर मिडियामा आएपछी झन् चर्को बिबादमा आएका हुन् । तेजेन्द्र… Continue reading सचिनको बुबा तेजेन्द्र परियारलाई खुवै उडाए टिकटकमा; टिकटभरी भाइरल बने (भिडियो हेर्नुस्)
नेदरल्यान्ड कि चेलि जो नेपाली पुरुषसग बिवाह गरेर अहिले नेपालम‌ बस्दै आएकि छिन् ।अहिले उनले नेपाली प्रस्टसग बोल्न सिकिसकेकि छिन् त्यति मात्रै हैन उनले नेपाली गितहरु पनि एकदमै स्पष्ट ढङ्गबाट गाउन समेत सक्दिरहेछिन् उतिकै सुरिलो स्वर अनि उतिनै सुनणदरि चेलि । यश अन्तर्बार्तामा उनले दर्जनौ नेपाली गितहरु गाइन ।`फुलबुट्टे सारी ´ अफ्रिकन बियोन्सेले गाएको सुनेपछि… Continue reading नेदरल्यान्डकि नेपाली बुहारिले यसरी गाइन `फुल बुट्टे सारी ´,नेपाली पनि स्पष्ट बोलिन् ,एकदमै सुन्दरी (हेर्नुस् भिडियो )
बालबालिका खे’लिरहेको पार्कमा निर्ल’ज्ज जोडीको चर्तिकला
काठमाडौं। सार्वजनिक पार्कमा बालबालिकाहरु खेलिरहेका बेला रतिक्रिडामा मस्त जोडीलाई एक महिलाले त्यही आएर आपत्ति जनाएपछि उनीहरुले गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुको चर्तिकलाले आक्रोशित एक स्थानीयले खिचेको भिडियोमा यो जोडी एल्सबरी बक्सको एडिनबर्ग प्लेइङ फिल्ड्समा अश्लील कार्यमा लिप्त देखिन्छन् । भिडियोमा देखिएअनुसार भिडियो खिच्ने ती महिला त्यो जोडी भएको ठाउँमा जान्छिन् र ‘यहाँ बालबालिकाहरु… Continue reading बालबालिका खे’लिरहेको पार्कमा निर्ल’ज्ज जोडीको चर्तिकला
राती ५ सय रुपैया दिने स’र्तमा स’म्बन्ध भयो…विहान पैसा नदि’एपछि भयो ल फ डा (भिडियो)
काठमाडौ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका झुंगा टोलमा भएको घ’टनाले नयाँ मोड लिएको छ । सो टोलमा एक जना विवाहित पुरुषले ५ सय रुपैया दिएर एक जना युवतीसंग स’म्बन्ध राख्ने सम्झौता गरे । राती उनीहरुबीच ५ सय रुपैया दिएर सम्बन्ध राख्ने सहमति भयो । तर भोलपल्ट ति पुरुषले उनलाई सहमति जनाएपछि सहमति गरे अनुसारको पैसा दिएनन्… Continue reading राती ५ सय रुपैया दिने स’र्तमा स’म्बन्ध भयो…विहान पैसा नदि’एपछि भयो ल फ डा (भिडियो)
इटहरीवाट पोखरा आएर होटलमा बसेका एक जो’डी नर्सरीमा एउटै पा’सोमा भे’टीए (भिडियो)
काठमाडौ । पोखरा लेकसाइडको होटलमा तीन दिन देखि बस्दै आएका पूर्वका एक जोडीले संसार छोडेका छन् । होटलमा उनीहरुले आफुहरु परिवार भनेर लेखाएका थिए । होटलमा बसेका उनीहरु केही बेर घुम्न भन्दै निस्केको होटल संचालकले बताएका छन् । लेकसाइडमा केही बेर हामी घुमेर आउँछौं भनेर निस्केका उनीहरु विहान रुम नम्बर १०६ मा बस्ने गेष्टहरु मृ… Continue reading इटहरीवाट पोखरा आएर होटलमा बसेका एक जो’डी नर्सरीमा एउटै पा’सोमा भे’टीए (भिडियो)
विवाह गरेको ४ दिनमै के भयो यस्तो ? वेहुलीको मृ त्यु, श्रीमानलाई लाग्यो यस्तो आ’रोप (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । भनिन्छ विवाह भगवानले माथि देखि नै जुराएर पठाएको हुन्छ । हिन्दु धर्मको मान्यता अनुसार विवाह बन्धन सात जुनीका लागि हो । तर अहिले विवाहलाई पनि सामान्य मानिन लागेको छ । विवाहको पवित्र सम्बन्धलाई नै हल्का बनाइएको छ । जसका कारण वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । महिलाहरुले वैवाहिक जिवनमा परेको समस्यालाई… Continue reading विवाह गरेको ४ दिनमै के भयो यस्तो ? वेहुलीको मृ त्यु, श्रीमानलाई लाग्यो यस्तो आ’रोप (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । सहोदर बहिनीले आफ्नै दाइको बच्चा जन्माइदिने भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर अमेरिकामा हालै एउटा यस्तै घटना भएको छ । अमेरिकाको वाशिंटनमा एकजना युवतीले आफ्नै दाइको बच्चा जन्माइदिएकी छिन् । आफ्ना दाइको पाँचौं बच्चाको इच्छा पूरा गरिदिन ती युवतीले भाडाको आमा बनेर अर्थात् सरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माइदिएकी हुन् ।… Continue reading दाइलाई चाहिएको थियो पाँचौँ बच्चा, बहिनीले दिइन् कोख